Si aad u kordhiso fursadahaaga inaad hesho shaqo waxaad wax ka baran kartaa jaamicada xirfadaha, jaamicad ama jaamicad sare. Haddii aad ku cusubtahay Iswiidhan oo aad haysato xirfad ay baahideeda shaqaale weyntahay waxaa jira fursadu dhowr ah. Halkan ayaad ka ogaanaysaa sida aad u maal-gelin karto waxbarashadaada.
Wax ku baro lacagta waxbarasho
Lacag waxbarasho waa kaalmo iyo amaahda loogu talogalay waxbarasho lagana helo CSN. Waxay ahaan kartaa waxbarsho ah dhanka waxbarashada dadka waaweyn, dugsiga dadka waaweyn ee shacbiga ah, jaamicada xirfada, jaamicad ama jaamicad sare iyo qaar ka mid ah waxbarashooyinka dalka dibediisa. Lacagta waxbarasho waxaad ka codsanaysaa CSN bogeeda intarnatka halkaas oo aad xitaa ka akhrin karto wixi dheeraad ah ee ku saabsan waxa adiga ku khuseeya.
CSN - Taageero waxbarasho
Wax ku baro taageero laga helo Xafiiska Shaqada
Adigu waxaad xaaladaha qaarkood taageero dhaqaale ka heli kartaa Xafiiska Shaqada si aad wax uga barato jaamicada xirfada, jaamicad ama jaamicad sare. Tani waxay ansax tahay haddii aad ku qorantahay damaanad qaadka shaqada iyo horumarka ama barnaamijka sal dhigashada.
Damaanad qaadka shaqo iyo horumarka
Haddii aad ka qayb-qaadatid damaanad qaadka shaqada iyo horumarinta waxaad fursad u heli kartaa kaalmo dhaqaale oo laga helo Xafiiska Shaqada si wax looga barto jaamicad xirfadeed, jaamicad, jaamicad sare iyo waxbarashooyinka ka dambeeya dugsiga sare ee kulliyadaha dadka waaweyn ee shacbiga Waxaan marka hore sameyneynaa qiimeyn ku saabsan waxbarashada loo baahanyahay si loo kordhiyo fursadahaaga ku aaddan in aad hesho shaqo. Markaas ayaad keligaa codsanaysaa waxbarashada. Waxaad wax baran kartaa isu-geyn 12 bilood oo waqti buuxa ah oo aad taageero dhaqaale naga hesho.
Barnaamijka sal dhigashada
Dhanka barnaamijka sal dhigashada waxaad wax ku baran kartaa taageero dhaqaale oo ah gunno lacag dhanka jaamicada xirfada, jaamicad ama jaamicad sare. Adiga waxaa lagaaga baahanyahay inaad haysato waxbarasho dugsi sare oo aasaas ah. Mararka qaarkood waa inaad xitaa soo dhigatay qaar ka mid ah koorsooyinka dugsiga sare si aad u awoodo inaad gasho waxbarasho gaar ah. Badanaaba waxaad xitaa u baahantahay inaad leedahay aqoon kugu filan oo ah Iswiidhishka iyo Ingiriisida. Haddii aad doonaysid inaad sii wadato waxbarasho ka dib barnaamijka sal dhigashada waxaad fursad u haysataa inaad lacag waxbarasho ka codsato CSN.
Loogu talogalay adigaaga ku csub Iswiidhan
Haddii aad ku cusub tahay Iswiidhan oo aad horey u haysatay xirfad ama waxbarasho aad kala timi dalkaagi waxaa la heli karaa jid dhakhso ah oo lagu galo suuqa shaqada.
Qiimeynta waxbarashada dalka dibediisa
Haddii aad haysato shahaado jaamicad sare, jaamicad ama jaamicad xirfadeed oo aad kala timi dalkaagi waa inaad u dirtaa Guddida Jaamicadaha sare iyo jaamicadaha (UHR). UHR ayaa sameysa qiimeynta waxbarashadaada oo ku siinaysa qoraal jawaab ahaan. Adigu waxaad xitaa isticmaali kartaa adeegooda qiimeynta ee dijitaalka ah si aad u fiiriso waxbarashadaadu waxa ay u dhigmato dhanka gudaha Iswiidhan. Haddii aad ku soo shaqaysay dhanka xirfadaha daryeelka caafimaadka waxaad taas badelkeeda u diraysaa shahaadadaa Maamulka arrimaha bulshada. Haddii aad tahay macalin ama macalin dugsiga xanaanada waxaa jirta fursada in aqoonsiga macalinimo laga codsado Wasaarada waxbarashada.
UHR:s qiimeyntooda waxbarasho dalka dibediisa ah
Maamuulka arrimaha bulshada kuna saabsan aqoonsiga
Wasaarada waxbarashada kuna saabsan aqoonsiga macalinimo
Jidka dhakhsaha ah
Haddii aad ku cusub tahay Iswiidhan oo aad haysato khibrad ama waxbarashada dhanka xirfad ay jirto baahi weyn oo shaqaale, waxa lagu magacaabo xirfad gabaabsi ah, waxaad fursad u yeelan kartaa inaad dariiq dhakhso ah u marto suuqa shaqada. Isku dar ah waxyaabo ay ka mid tahay qiimeynta, tababar goob shaqo, tababarka luqadda iyo waxbarasho dhamaystir ah oo si gaar ah u habaysan ayaad si dhakhso ah ku heli kartaa shaqo aad ku isticmaali karto waxbarashadaadi iyo waayo aragnimadaadi hore.
Tani waxaa lagu magacaaba jidka dhakhsaha ah oo waxay jirtaa dhanka tusaale ahaan macalimiinta, direwalada baabuurta xamuulka, shaqaalaha dhanka qaybta dhismaha, shaqaalaha warshadaha alwaaxa, cunto kariyaasha iyo dhanka daryeelka caafimaadka iyo bukaanka. Waxbarashadan way kala duwantahay iyadoo ku xiran kolba nooca xirfada ee ay khuseyso.